Fanamby napetraky ny SEG : Tratra ny tanjona -
AccueilRaharaham-pirenenaFanamby napetraky ny SEG : Tratra ny tanjona
28/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Na dia mbola amin’ny volana desambra ho avy io aza ny fe-potoana nomen’ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria, ny jeneraly Randriamahavalisoa Girard, ireo vondron-tobim-paritry ny zandary manerana ny nosy hampisehoana fa tena mahefa ny asany tokoa izy ireo, dia efa tsapa sy hita taratra sahady fa tratra ny tanjona amin’ny fampiharana ireo paikady rehetra napetraka hiadiana amin’ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Tamin’ny alalan’ny fidinana ifotony sy ny fihainoana mivantana ireo vahoaka izay no tanjona, ary vaindohan-draharahan’ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena no nentina nanatanterahana izany. Tany Ambatonapoaka no nanombohan’ny jeneraly Randriamahavalisoa Girard ny fampiharana ny hetsika famongorana ny asan-dahalo sy ny fametrahana fandriam-pahalemana, ka mbola notohizan’ny jeneraly Tsirivelo Nicolas, Talen’ny kabinetra eo anivon’ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria, any Farafangana , Manakara, Manambondro ary Vangaindrano izany amin’izao fotoana izao. Efa maro ny fitetezam-paritra vita, ary nahitam-bokany avokoa izany. Marihina fa mbola hitohy any amin’ireo faritra maro toa ny any Tsiroanomandidy, Andilamena, Nosy Be, Ambatofinandrahana , Ambalavao sy ny faritra manodidina hafa io fidinana ifotony io amin’ny volana desambra ho avy io.
Fanamafisana ny baiko
Ho fanamafisana ireo fanentanana sy ny baiko nomena no antony lehibe nanaovana izao tomban’ezaka izao, izay azo tsapain-tanana fa nahomby tokoa. Tsy hijanona hatreo anefa ny ezaka atao, fa hotohizana hatrany mba ahafahana tena mampanjaka ny resaka fandriam-pahalemana eto amin’ny firenena. Isan’ireo hetsika goavana nataon’ny zandarimaria tany Fiadanana, kaominina Sarobaratra , Distrikan’i Tsaratanàna izay nahitam-bokany tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo izao ny nahafahana namerina omby 190 tamin’ny tompony, izay norobain’ny dahalo miisa 30 nirongo basy. Maro ny paikady napetraka izay efa tsara lamina, ka tsy nisy namoy ny ainy, na naratra ireo zandary sy fokonolona mpanara-dia. Ankoatra izay, dia notanterahina tamin’iny herinadro lasa teo iny ihany koa ny fametrahana dina ifampifehezan’ny mponina ao amin’ny kaominina Berivotra 5X5 sy Andriba, izay lalàna mifehy izany ny fanarahan-dia ataon’ny fokonolona miaraka amin’ny fokontany vantany vao misy fanafihana mitranga. Mbola tafiditra ao anatin’ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana avokoa no antony nanaovana izany.
Betsaka no namoy ny ainy
Araka ny fanadihadiana natao, dia fantatra fa ireo zandary no tena betsaka mamoy ny ainy indrindra amin’ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Saika isam-bolana dia handrenesana zandary lavon’ny jiolahy sy ny dahalo foana eto amintsika. Io no porofo iray fa tena manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy izy ireo amin’ny fandraisana ny andraikiny. Misy ihany anefa ireo zandary mandika lalàna sy fanetriben’ny firenena amin’ny firaisana tsikombakomba amin’ireo olon-dratsy, ka izay ihany koa no antony hisian’ny fanadiovana ao anatin’ity vondron-kery ity. Ankoatra ny ady amin’ny kolikoly, dia lohalaharana eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, izay tarihin’ny jeneraly Randriamahavalisoa Girard ny famerenana ifotony ny fahatokisan’ny vahoaka, amin’ny alalan’ny asa sy ny fihainoana azy ireo mivantana. Marihina fa efa nahazo fahefana tanteraka avy amin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ity sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria ity amin’ny fanaovana izao hetsika famongorana ny tsy fandriam-pahalemana izao.Telo volana moa no nomen’ity tompon’andraikitra ambony ity ireo zandary hanaporofoana fa mahavita ny asany tokoa izy ireo, ka amin’ny volana desambra ho avy io, dia hisy ny fijerena ny vokatra, ary eo ihany koa no hanapahana sy handraisana fanapahan-kevitra ho an’ireo manam-pahefana ratsy fitondran-tena sy tsy nahatontosa ny andraikitra nankinina taminy.